Hair loss after child birth - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးမမေတေို့အနနေဲ့ ရငျသှေးလေးကို မှေးဖှားပွီးနောကျပိုငျး အားပွညျ့အောငျ ဘယျလိုပွနျလညျနထေိုငျရမလဲ၊ ဗိုကျအကွာပွတျတာတှေ အမွနျပြောကျအောငျ ဘာတှလေုပျရမလဲ၊ကလေးကို နို့ခြို့တိုကျကြှေးဖို့တှေ၊ စောငျ့ရှောကျဖို့ စသညျဖွငျ့ တှေးတောစဉျးစားလရှေိ့ကွပါတယျ… သို့သျော မြှျောလငျ့မထားတတျပဲ ပျေါလာတတျတာလေးကတော့ ကလေးမှေးပွီးနနောကျပိုငျးမှာ ယခငျကထကျ ဆံပငျကြှတျတယျလို့ ခံစားရခွငျးပါပဲ…
ဒီလိုဖွဈရခွငျးဟာ မြားသောအားဖွငျ့ ပုံမှနျပါပဲ…သာမနျကိစ်စရပျလေးဖွဈပမေယျ့ စိတျဖိဆီးမှုတှမြေားတဲ့ မီးနသေညျ၊ နို့တိုကျမိခငျအဖို့တော့ စိတျအနှောကျအယှကျ တဈခုလို မွငျလာတတျပါတယျ.. ဒါကွောငျ့”ဘာကွောငျ့ ဆံပငျပိုကြှတျတာလဲနဲ့.. ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ နညျးလမျးလေး”တှေ ပွောပွခငျြပါတယျ…
ဘာကွောငျ့ ဆံပငျဟာ ခါတိုငျးထပျ ပိုကြှတျတာပါလိမျ့?
– ဆံပငျကြှတျရခွငျးရဲ့ အဓိက ပွသနာကတော့ ကလေးမှေးပွီးနောကျပိုငျး ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ…ကိုယျဝနျဆောငျကာလမှာ ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုအမြားဆုံးဖွဈပါတယျ… hCG၊ estrogen ၊ pregesterone၊ oxytocin ၊ prolactin စတဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ပိုထုတျလုပျမယျ.. ဒါပွငျ့ မှေးဖှားလာနီးလေ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သှေးပမာဏဟာ မြားစှာ တကျလာပါတယျ…
– ဆိုတော့ကာ ဒီလို ဟျောမုနျးထဲကမှ estrogen နဲ့ progesteroneဟာ ကိုယျဝနျနဲ့ တပွိုငျထဲ တကျလာသလို မှေးဖှားပွီးတာနဲ့ ကသြှားတတျပါတယျ… ဒီအခါမှာ ဆံပငျကြှတျခွငျးရဲ့ ပွသနာ အစပွုပါတယျ..
– ကိုယျဝနျဆောငျနခြေိနျအတှငျးမှာ မွငျ့တကျနတေဲ့ estrogen ဟာ ဆံပငျကြှတျခွငျးကို မြားစှာကာကှယျပေးပါတယျ.. ဒါပွငျ သှေးပမာဏနှငျ့ သှေးလညျပတျမှုအားကောငျးခွငျးတှကေလဲ ကိုယျဝနျဆောငျနခြေိနျမှာ ပုံမှနျဆံပငျကြှတျခွငျးထကျ လြော့နညျးနစေတေတျပါတယျ…
– သို့သျော ကလေးမှေးပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပွောခဲ့တဲ့ hormone တှဟော တဟုနျးထိုးပွနျကသြှားတတျတာမို့ ဆံပငျဟာ ပုံမှနျထပျ ပိုကြှတျလာပါမယျ.. တခါတရံမှာ ဆံပငျခညျြထှေးတှေ၊ အိပျယာပျေါမှာ ဆံပငျကြှတျစတှေ အမြားကွီးတှရေတတျပါတယျ….ဒီလို ဖွဈခွငျးဟာ ကလေးမှေးပွီး သုံးလေးလမှာ အမြားဆုံးဖွဈတတျပါတယျ…
– နောကျပိုငျးမှာ ပုံမှနျပွနျလညျပတျလာတဲ့ hormone level တှကွေောငျ့ တဖွညျးဖွညျး နညျးပါးသှားပါမယျ… ကလေး တဈနှဈသားလောကျရောကျပါက ဒီလိုဆံပငျကြှတျခွငျးဟာ ပုံမှနျအနအေထားသို့ ပွနျလညျရောကျရှိသှားနိုငျပါတယျ…
“ဒါကွောငျ့ ဒီကိစ်စပျေါမှာ စိတျအနှောကျအယှကျ အမြားကွီး မဖွဈစသေငျ့ပါ…”
ဒ့ါပွငျ ဒီလို ဆံပငျကြှတျခွငျးမြိုးကို လြော့နညျးအောငျ ပွုလုပျလို့ရမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါသေးတယျ…
– ကိုယျဝနျဆောငျကာလတုနျး သောကျခဲ့တဲ့ အားဆေးလေးတှေ ဆကျသောကျပါ
– အစားအသောကျမှနျပါစေ၊ အားရှိတဲ့အစားအစာ ၊ ဗီတာမငျနဲ့ သံဓာတျ ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာ ပိုစားပါ
– ဆံပငျကို dryer နဲ့ မှုတျတာတှေ ရှောငျပါ.. ဆံပငျပိုသှငျးတာတှေ မလှုပျပါနဲ့၊
– ဆံပငျဘီးဖီးပါက အရမျးအားဖွငျ့ ဖီးတာမြိုးမလုပျပါနဲ့.. ဖွဈနိုငျပါက တနကေို့ တဈခါလောကျသာ ဖီးပါ
– ဆံပငျကြှတျခွငျး ကာကှယျနိုငျတဲ့ shampoo အသုံးပွုပါ၊ conditioner အသုံးပွုနိုငျပါတယျ…
ဒီလိုအားဖွငျ့ ဆံပငျကြှတျခွငျးကို အတျောတနျ ကာကှယျနိုငျပါလိမျ့မယျ…
အကယျ၍ ကလေး တဈနှဈသာ အရှယျလောကျထိ ရောကျပွီး ဆံပငျဟာ သာမနျထပျ ပိုကြှတျမွဲကြှတျနပေါက သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျဆီပွသပွီး အကွံဉာဏျတောငျးခံ ကုသနိုငျပါတယျ…
တဈသားမှေးလို့ တဈသှေးလှတဲ့ ကလေးမမေမြေား ဖွဈကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ…
က​လေး​မေ​မေတို့အ​နေနဲ့ ရင်​​သွေး​လေးကို ​မွေးဖွားပြီး​နောက်​ပိုင်း အားပြည့်​​အောင်​ ဘယ်​လိုပြန်​လည်​​နေထိုင်​ရမလဲ၊ ဗိုက်​​အကြာပြတ်​တာ​တွေ အမြန်​​ပျောက်​​အောင်​ ဘာ​တွေလုပ်​ရမလဲ၊က​လေးကို နို့ချို့တိုက်​​ကျွေးဖို့​တွေ၊ ​စောင့်​​ရှောက်​ဖို့​ စသည်​ဖြင့်​ ​တွေး​တောစဉ်းစား​လေ့ရှိကြပါတယ်​… သို့​သော်​ ​မျှော်​လင့်​မထားတတ်​ပဲ ​ပေါ်လာတတ်​တာ​လေးက​တော့ က​​လေး​မွေးပြီး​နေနာက်​ပိုင်းမှာ ယခင်​ကထက်​ ဆံပင်​ကျွတ်​တယ်​လို့ ခံစားရခြင်းပါပဲ…
ဒီလိုဖြစ်​ရခြင်းဟာ များ​သောအားဖြင့်​ ပုံမှန်​ပါပဲ…သာမန်ကိစ္စရပ်​​လေးဖြစ်​​ပေမယ့်​ စိတ်​ဖိဆီးမှု​တွေများတဲ့ မီး​နေသည်​၊ နို့တိုက်​မိခင်​အဖို့​တော့ စိတ်​အ​နှောက်​အယှက်​ တစ်​ခုလို မြင်​လာတတ်​ပါတယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​”ဘာ​ကြောင့်​ ဆံပင်​ပိုကျွတ်​တာလဲနဲ့.. ​ဆောင်​ရန်​ ​ရှောင်​ရန်​ နည်းလမ်း​လေး​”​တွေ ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
ဘာ​ကြောင့်​ ဆံပင်​ဟာ ခါတိုင်းထပ်​ ပိုကျွတ်​တာပါလိမ့်​?
– ဆံပင်​ကျွတ်​ရခြင်းရဲ့ အဓိက ပြသနာက​တော့ က​လေး​မွေးပြီး​နောက်​ပိုင်း ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲမှု​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​…ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ကာလမှာ ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲမှုအများဆုံးဖြစ်​ပါတယ်​… hCG၊ estrogen ၊ pregesterone၊ oxytocin ၊ prolactin စတဲ့ ​ဟော်​မုန်း​တွေ ပိုထုတ်​လုပ်​မယ်​.. ​ဒါပြင့်​ ​မွေးဖွားလာနီး​လေ ခန္ဓာကိုယ်​ရဲ့ ​သွေးပမာဏဟာ များစွာ တက်​လာပါတယ်​…
– ဆို​တော့ကာ ဒီလို ​ဟော်​မုန်း​ထဲကမှ estrogen နဲ့ progesteroneဟာ ​ကိုယ်​ဝန်​နဲ့ တပြိုင်​ထဲ တက်​လာသလို ​မွေးဖွားပြီးတာနဲ့ ကျသွားတတ်​ပါတယ်​… ဒီအခါမှာ ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်းရဲ့ ပြသနာ အစပြုပါတယ်​..
– ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေချိန်​အတွင်းမှာ မြင့်​တက်​​နေတဲ့ estrogen ဟာ ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်းကို များစွာကာကွယ်​​ပေးပါတယ်​.. ဒါပြင်​ ​သွေးပမာဏနှင့်​ ​သွေးလည်​ပတ်​မှု​​အား​ကောင်းခြင်း​တွေကလဲ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေချိန်​မှာ ပုံမှန်​ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်းထက် ​လျော့နည်း​နေ​စေတတ်​ပါတယ်​…
– သို့​သော်​ က​လေး​မွေးပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ ​​ပြောခဲ့တဲ့ ​hormone ​တွေဟာ တဟုန်းထိုးပြန်​ကျသွားတတ်​တာမို့ ဆံပင်​ဟာ ပုံမှန်​ထပ်​ ပိုကျွတ်​လာပါမယ်​.. တခါတရံမှာ ဆံပင်​ချည်​​ထွေး​တွေ၊ အိပ်​ယာ​ပေါ်မှာ ဆံပင်​ကျွတ်​စ​တွေ အများကြီး​တွေရတတ်​ပါတယ်​….ဒီလို ဖြစ်​ခြင်းဟာ က​လေး​မွေးပြီး သုံး​လေးလ​မှာ အများဆုံးဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…
– ​နောက်​ပိုင်းမှာ ပုံမှန်​ပြန်​လည်​ပတ်​လာတဲ့ hormone level ​တွေ​ကြောင့်​ တဖြည်းဖြည်း နည်းပါးသွားပါမယ်​… က​လေး​ တစ်​နှစ်​သား​လောက်​​ရောက်​ပါက ဒီလိုဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်းဟာ ပုံမှန်​အ​နေအထားသို့ ပြန်​လည်​​ရောက်​ရှိသွားနိုင်​ပါတယ်​…
“ဒါ​ကြောင့်​ ဒီကိစ္စ​ပေါ်မှာ စိတ်​အ​နှောက်​အယှက်​ အများကြီး မဖြစ်​​​စေသင့်​ပါ…”
ဒ့ါပြင်​ ဒီလို ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်းမျိုးကို ​လျော့နည်း​အောင်​ ပြုလုပ်​လို့ရမယ့်​ နည်းလမ်း​လေး​တွေ ရှိပါ​သေးတယ်​…
– ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ကာလတုန်း ​သောက်​ခဲ့တဲ့ အား​ဆေး​လေး​တွေ ဆက်​​သောက်​ပါ
– အစားအ​သောက်​မှန်​ပါ​စေ၊ အားရှိတဲ့အစားအစာ ၊ ဗီတာမင်​နဲ့ သံဓာတ်​ ကြွယ်​ဝတဲ့ အစားအစာ ပိုစားပါ
– ဆံပင်​ကို dryer နဲ့ မှုတ်​တာ​တွေ ​ရှောင်​ပါ.. ဆံပင်​ပိုသွင်းတာ​တွေ မလှုပ်​ပါနဲ့၊
– ဆံပင်​ဘီးဖီးပါက အရမ်းအားဖြင့်​ ဖီးတာမျိုးမလုပ်​ပါနဲ့.. ဖြစ်​နိုင်​ပါက တ​နေ့ကို တစ်​ခါ​လောက်​သာ ဖီးပါ
– ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်း ကာကွယ်​နိုင်​တဲ့ shampoo အသုံးပြုပါ၊ conditioner အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​…
ဒီလိုအားဖြင့်​ ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်းကို အ​​​တော်​တန်​ ကာကွယ်​နိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​…
အကယ်​၍ က​လေး တစ်​နှစ်​သာ အရွယ်​​လောက်​ထိ ​ရောက်​ပြီး ဆံပင်​ဟာ သာမန်​ထပ်​ ပိုကျွတ်​မြဲကျွတ်​​နေပါက သက်​ဆိုင်​ရာ ဆရာဝန်​ဆီပြသပြီး အကြံဥာဏ်​​တောင်းခံ ကုသနိုင်​ပါတယ်​…
တစ်​သား​မွေး​လို့ တစ်​​သွေးလှတဲ့ က​လေး​မေ​မေများ ဖြစ်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​…